Uyini umehluko phakathi kweXLSX ne-CSV? - Imibuzo Evame Ukubuzwa
Main > Imibuzo Evame Ukubuzwa > Xlsx vs csv - ukuthola izixazululo
Xlsx vs csv - ukuthola izixazululo
Uyini umehluko phakathi kweXLSX ne-CSV?
Ku-xlsxungagcina amafomula, amagrafu, ama-pivots, njllku-ifayela. AI-CSVyifayela lombhalo oyisicaba elisebenzisa i-delimiter ukwahlukanisa izinkambu, isb. Yize i-Excel ingafunda ifomethi futhi ungasebenzisa amafomula kuyo, awukwazi ukuwagcina amafomulaku-ishidi. I-Excel izolondoloza kuphela umphumela wesibalo.Juni 13, 2016
Kulungile wamukelekile futhi, ekugcineni sesiphelelwe isabelomali, kepha lokho okudingeka sikwenze manje ukukhuluma ngamafomethi wefayela lespredishithi ahlukile esiwatholayo futhi akufanele ngempela weqe le ndatshana ngiyazi ukuthi kubonakala kuyisicefe khuluma ngamafomethi wefayela kepha ngethembe ukuthi lolu kuzoba ulwazi oluwusizo impela ngakho-ke ake siqale ngokugcina idokhumenti yethu lapha, lesi yispredishithi engisisebenzise ku-LibreOffice njengoba kulungile ngizokweqa lokhu okuzenzakalelayo okwamanje bese ngeqa ngiqonde kokungenzeka ukuthi kunakho konke ifomethi esetshenziswa ngokujwayelekile ezoba yile fomethi ye-xlsx, ngamanye amagama le yifomethi ye-microsoft excel, ibizwa ngokuthi yi-microsoft excel 2007 slash 2010 xml ingahle ingasho into efanayo etafuleni lakho, kepha noma kunjalo eyokugcina iba uhlobo lokugcina lwesijobelelo noma isandiso lapha bexlsx be. Ngizoqhubeka futhi ngilondoloze lokhu kudeskithophu yami futhi ngizoyinika igama kusuka kuRobo Bunny Budget, kulungile ngizoqhubeka ngikugcine manje, ake sikugcine lokho futhi uma ngenza njalo, ngoba ngizo Ngisebenzisa i-Libre Office futhi ngoba i-LibreOffice ayilondolozi ngokwendabuko ayizigcini ngokuzenzakalela, angiyigcini ngale ndlela ngokwakhona, iyabuza, hey uqinisekile ukuthi ufuna ukusebenzisa lokhu futhi yebo ngifuna ngempela ukusebenzisa lokhu, kulungile impela, akudingeki sikhathazeke ngakho ngiqhubekile ngakugcina njengefayela le-XLS-Xformat futhi lokho kuhle. Le ifomethi enhle kakhulu ngoba ingivumela ukuthi ngihlanganyele leli thebula nabanye abantu abangase bangasebenzisi i-Libre Office.Nginamandla okugcina izindlela ezimbili ukuze abanye abantu bakwazi ukusebenzisa leli fayela, noma ngabe bengasebenzisi sebenzisa i-Libre Office, kulungile futhi lokho kuhle, kungani ngingakuvali lokho futhi sizobona ngomzuzwana ukuthi bekuyisabelomali sethu sesampula asifuni isabelozimali seRobo Bunny yilokho esisanda kukugcina ake siqhubeke nokuvula lokho kulungile Ngizokuvula lapha e-office yamahhala kulungile impela ngakho-ke kusindisa ifomethi ye-xlsx manje ake sibheke amanye amafomethi atholakalayo kithi ngibuyele kufayela bese ngibuyele emuva isikhathi esisodwa engizokonga futhi ngifuna ngikukhombise enye into eyodwa okungenzeka ukuthi uyibonile phansi lapha kukhona ifomethi ye-xls futhi umehluko kuphela ukuthi ngu-am akanayo i-X eyengeziwe ekugcineni.
Ungazibuza ukuthi yini umehluko phakathi kwalezi. Ibizwa nangokuthi i-Microsoft Excel Le yinguqulo yakudala yefayela lespredishithi le-Microsoft Excel futhi ungacabanga ukuthi oh indala angazi ukuthi angifuni ukuyisebenzisa kepha empeleni kuyasiza kakhulu ukwazi njengoba inkinga inguhlobo olusha , inguqulo entsha eyi-xlsx indala, ayikwazi ukuyivula futhi ithenge izinhlobo ezindala engikhuluma ngazo izinguqulo ezindala sengathi ngabe unenguqulo ka-2003 ye-excel engaziyo ukuthi indala kuleli phuzu, kepha wena ngiyazi ukuthi abanye abantu basenayo isoftware yakudala kumakhompyutha abo ukube ubunenguqulo yakudala ye-Excel ubungeke uvule leli fayela le-xlsx kulungile alibuyeli emuva emuva kanti amafayela we-XLS angavulwa ngazo zombili izinhlobo ze-Excel ezindala nezintsha ze-Excel, manje mina kufanele ngivume ukuthi ngikhulume isikhathi eside kangakanani nabafundi bami ngakho ngoba eminyakeni embalwa eyedlule empeleni bekuyinto enkulu kepha abantu abaningi bebesasebenzisa izinhlobo ezindala ze-Excel manje abantu abaningi abanazo izinhlobo ezintsha ye-Excel Kubonakala kujwayelekile kakhulu Akuvamile kakhulu manje ukuthi i-peopl Anginayo i-XLSX engavula amafayela, kepha ngicabanga ukuthi kungenzeka ngonyaka ozayo noma ukuze kusabalulekile ukwazisa abantu, kwanele ukusho ukuthi, lapho ubona ifayela le-XLS ungayisebenzisa Vula inguqulo yakho ye-Excel , inqobo nje uma kuyifayela olaziyo, inqobo nje uma yifayela ngokwalo liphakanyisiwe, ukuze sikwazi ukuqhubeka nokugcina futhi, noma ngabe siyi-inlibreoffice, singagcina ngefomethi ye-Microsoft Excel engagcina ngefomethi ye-xls uma sifuna futhi ngizoqhubeka ngenze lokho ngizochofoza bese ngigcina futhi sithola leli bhokisi elincane lengxoxo lapho izembe lisicela ukuthi siqinisekise ifomethi yefayela, futhi lokho kuhamba kahle nganoma iyiphi inguqulo ye-Excel, yize udinga ukuqinisekisa ukuthi unayo inguqulo yakamuva ye-Excel ukuze kuvulwe amafayela we-XLSX. Nansi icebo elihle, uma kwenzeka uthola ifayela le-XLSX futhi kwenzeka ukuthi ube nohlobo oludala lwe-Excel futhi uzama ukuthola ukuthi ulivula kanjani ngoba awukwazi ukulivula, i-Libre Office empeleni iyawavula wonke lawa mafayela, unamandla futhi ungavele ulande i-Libre Office okwesikhashana bese uvula lelo fayela kuyo, ngakho-ke lelo iqhinga elihle lokucacisa izinto ukubuyela kuLibreOffice bese ukhuluma ngeLibre Officelet ebuyela emuva futhi ngifuna ukuthi libe namanye amafomethi amafayili ambalwa engiwafunayo ukukhuluma nawe mayelana.
Ake sibuyele emuva futhi silondoloze futhi nalu olunye uhlobo lwefayela Lolu uhlobo lwefayela lokuqala oluqhamuka njengolunye uhlobo lokuzenzakalelayo kwethu futhi ungakubona lokhu kaninginingi, ikakhulukazi lapho usebenza nabanye abantu abane-Libre Office noma enye isoftware yomthombo ovulekile, ungabona isandiso se-ODS OK ODF imele i-OpenDocument Format OK futhi i-ODSformat yifomethi ezenzakalelayo esetshenziswa yi-libreoffice ukugcina amatafula, uma ungashintshi okuzenzakalelayo, kulungile ngifuna ukukutshela ngakho le fomethi kungenzeka ukuthi ayizukuyisebenzisa kaningi, ngaphandle kokuthi ngiqonde umuntu onjengami, lapho ngenza ispredishithi futhi ngiyazi ukuthi ngeke ngikwenze ukwabelana ngaleli thebula nabanye futhi lihlala kwikhompyutha yami bese wena ngiyakwazi, futhi ngisebenzisa i-Libre Office ngayo yonke into enhle, manje ngizohle ngigcine yonke into ngefomethi ye-ODS futhi ungakhathazeki ngoba ayenzi mehluko, kepha isikhathi esiningi uzobe wabelana ngamafayela akho, amafayela wakho wespredishithi, namanye, kulungile noma ungahle uthande ukuthumela th em ukusebenza noma okuthile okufana nalokho, lapho ungafuni ukungena ngefomethi ye-ODS, amanye amaVersel angavuleka, kepha amanye awakwazi. Ngakho-ke ufuna ukuguquguquka ngangokunokwenzeka uma ufuna ukuthi ifayili lakho livulwe ngezicelo eziningi ezahlukahlukene ngangokunokwenzeka ukuze unamathele ngefomethi ye-Excel XLS X noma ifomethi ye-XLS, kepha ngifuna ukukutshela okuthile mayelana nokutshela ifomethi ye-ODS ngoba ukusethwa okuzenzakalelayo ku-LibreOffice futhi sisebenzise i-Libre Office njengesibonelo sethu kuze kube manje, nali ifomethi yefomethi yethu ye-ODS esisanda kuyigcina ilungile womathathu lawa mafayili ngaphandle kwefomethi iyafana kepha okuqukethwe uqobo izinombolo zefomula konke esikubhale ngokufana kulungile umehluko kuphela ifomethi yefayili yekhompyutha ephathelene nendlela izinto ezifakwe ngayo amakhodi kulungile ake sibuyele ku-libre office amanye amafomethi wamafayela amabili ngifuna ukukhuluma nawe ngalokhu, Kulungile, lama fayela amabili amafomethi okungenzeka ukuthi ngeke uwasebenzise kaningi, Kulungile, kepha ngifuna ukudala owaziyo ngakho, ake sibuyele kungobo yomlando bese sigcina, ngenkathi ngifuna ukukhuluma nawe ngale fomethi yefayela ebizwa nge-CSV manje okungenzeka uyibonile lokhu mhlawumbe unabomdabu awunabo unayo umbhalo wombhalo wombhalo csv futhi i-CSV imele amanani ahlukaniswe ngokhefana futhi yilokho impela manje ngiyaqhubeka futhi ngilondoloze lokhu ngefomethi ye-CSV Akuyona ifomethi yefayela ewusizo kakhulu yalokhu esisanda kukwenza lapha, lokho isabelomali, kepha ngizoqhubeka ngikugcine lokho nokuthi kuzothini kimi, kuzothi sawubona kulungile wazi esinye isikhathi sokuqinisekisa ukuthi ngiyaqhubeka nokwenza lokho ngivele ngiqhubeke bese ngichofoza yebo kulungile futhi kuyanikeza kimi isexwayiso ukuphela kwento yonke esho kimi ukuthi leli phepha lokusebenzela lamanje ligciniwe ngoba ngikwazi ukugcina i-CSV kuphela ngigcina ishidi elilodwa ngasikhathi sinye futhi lokho kulungile ngokuphelele kulokho esikwenza lapha lapho ngifuna ukuvula le i ngizozama ukuvula lokhu kuyo, ifayili lombhalo elilula nje, kulungile ukukubonisa ukuthi kwenzekani lapha futhi ubheke lokhu bese uya khona oh lokhu kuyenyanyeka kabi angikuthandi nakancane lokhu ekwenzayo ukuthi igcina idatha embhalweni ocacile ohlukaniswe ngamakhoma futhi ungahle ucabange ukuthi ukusetshenziswa kwaleli lungelo kuleli cala akusizi ngani konke ibigcine yonke i-dataave kepha silahlekelwe yifomula nakho konke okusetafuleni okusebenzisekayo, silahlekelwe yikho konke lokho, ngakho-ke kwisabelomali sohlobo oluthile lwesipredishithi esingasebenzi njengalesi asilusizo kakhulu ifomethi yethu, kepha i-CSV iyifomethi ewusizo kakhulu yokunye okuthile.Ilusizo lapho usebenzisa ispredishithi Ukugcina imininingwane ngakho ngizoqhubeka futhi ngiqale okwesikhashana ispredishithi esisha lapha futhi kuthiwani uma ngabe unohlobo oluthile lokuthi uma benginabo bonke oxhumana nabo engingabheka kubo, mhlawumbe h okuthile okufana negama lokuqala nesibongo nekheli le-imeyili nenombolo yocingo efana naleyo bese uthi uyazi uJohn Smith bese kuthi blah blah blah blah ngakho-ke UJaneSmith njll njll njll Kulungile, abanye abantu bagcina yonke imininingwane yabo bese sisebenzisa ifomethi ye-raster lapha.
uhlelo lokusebenza lwe-virtual didlogical
Manje ukulondoloza imininingwane eminingi, ifomethi ye-CSV ilula kakhulu njengoba ifomethi ye-CSV iyifomethi ephathekayo evumela ukuthi wena ugcine idatha kahle kakhulu futhi uthumele futhi uye nasezinsizeni ngempumelelo Kulungile, ngiqonde ukuthini? Ake sithi unamathani namathani amarekhodi lapha, mhlawumbe ufuna ukuthatha le datha, lonke lolu lwazi, futhi ukungenise lokho kuhlobo oluthile lomphathi wokuxhumana, kulungile, uhlobo oluthile lwesoftware ekuhlelela bonke oxhumana nabo bakho, noma mhlawumbe wena ngifuna ukuthi ukuthekelisa kuhlobo oluthile lwesistimu njengohlobo oluthile lohlelo lokuphathwa koxhumana nabo noma into efana naleyo-ke kulokhu ukugcina iphepha lokusebenzela elithile njengefayela le-CSV kuyasiza kakhulu ngoba lokhu kuqinisekisa ukuthi kususa zonke izinto ezijwayele ukudida umphathi wokuxhumana noma Olunye uhlobo lwesoftware izosusa konke ukufomatha nakho konke namafomula nanoma yini engahle ididanise noma yiziphi zalezo zinhlelo bese imane idlulisa imininingwane, ngakho-ke amafayili we-CSV amanani ahlukaniswe ngokhefana awusizo kakhulu lapho kudluliswa idatha kungena ngaphandle kwezicelo. Kulungile, mhlawumbe unenkinga yalokho mhlawumbe unomphathi wokuxhumana, uhlobo oluthile lomphathi wokuxhumana, futhi ufuna ukwenza isipele bonke oxhumana nabo. Mhlawumbe unezinkulungwane zoxhumana nabo lapho futhi ufuna ukubuyela nabo.
Eziningi zalezi zisebenzisa eziningi zalezi zinhlelo zesoftware zikuvumela ukuthi uthumele lonke ulwazi nefomethi ye-CSV bese uqagela ukuthi ungathumela kanjani amaspredishithi ngefomethi ye-CSV, futhi ungangenisa idatha ngefomethi ye-CSV kuma-spreadsheet Kholwa noma cha, izongenisa empeleni konke bese ukubeka konke faka yonke idatha kulawo mabhokisi ahlelwe kahle kahle ukuze ukwazi ukwenza izinto, ulungise izinto, futhi wenze zonke izinhlobo zezinto ezipholile ezingaphezudlwana kwalesi sigaba, kulungile thina ikugcine ugxile empeleni vele ugxile ekusebenziseni amaspredishithi namafomula wokufunda nemisebenzi kanye nokunye okunjalo, kepha uyazi lapho uqala ukwenza ukuphathwa kwedatha okuningi futhi usebenzise amaspredishithi uzothola okuningi okuhle okusetshenziselwa lokho, ngakho-ke amafomethi we-CSV konke manje, ifomethi yokugcina engifuna ukukutshela ukuthi kukhona ifomethi okungenzeka ukuthi ngeke uyisebenzise kaningi. Yifomethi ye-PDF ongazi ukuthi ama-PDF asevele ekhona. I-PDF imele i-Portable Document Format futhi lokho empeleni uhlobo lwefayela okuyifayela elingahleki kahle, ngakho-ke lokhu ngeke kube wusizo olukhulu uma ufuna ukwabelana ngetafula lakho.
Bafuna omunye umuntu abe nethuba lokungena futhi ahlele futhi afake imininingwane engaba wusizo kuyo, ngokwesibonelo, ake sithi unohlelo lwebhizinisi olukhona, kulungile, futhi ake sithi, esikhundleni salokhu yisabelomali sokurekhoda, mhlawumbe ingabe lolu uhlobo oluthile lwesabelomali esiphelele noma mhlawumbe kungukuhlaziywa kokuhamba kwemali noma okuthile okunjalo? Mhlawumbe empeleni ufuna ukuthekelisa ku-PDF bese ungafaka leyo PDF njengokunamathiselwe noma okuthile kuhlelo lwakho lwebhizinisi le-PDF. Futhi, ukusebenzisa i-PDF ejwayelekile nokuhlela ama-PDF kungaphandle kwesilinganiso salesi sigaba, kepha kwanele ukusho ukuthi ungathumela kusuka ezinhlelweni eziningi, izinhlelo zokusebenza eziningi zespredishithi zikuvumela ukuthi uthumele ngqo njenge-PDFLibreOffice, okwenza kube lula impela. Kukhona inkinobho lapha evumela ukuthi uthumele njenge-PDF ngqo ukuze ngikwazi ukuyigcina njenge-PDF futhi uma ngiyivala futhi lapho ngiyivula lapha sizobona lapha isabelomali sami silungile noma manje angikwazi ngihlele impela kepha uyazi ukuthi ngingangena futhi ngingahle ngifune ukungena ngifomathe lokhu njenge-li kancane kepha lokhu kulungele ukuphrintwa manje futhi akudingeki ngikhathazeke ngayo yonke le migqa futhi mhlawumbe ngingahle ngikwazi ukukwazisa ukuthi Uyakuhlela lokhu bese ungeza le PDF njengokunamathiselwe kuhlelo lwebhizinisi noma okuthile noma mhlawumbe umbiko wezezimali noma into enjalo? ukusetshenziswa okuthuthukile okuthe xaxa, kepha bengifuna wazi ngalokhu, ngakho-ke lawa amafomethi ayisihlanu amakhulu okungenzeka ukuthi siwasebenzisa.
Kunamanye amafomethi amaningi laphaya futhi kepha lawo mahlanu engicabanga ukuthi awusizo kunawo wonke esiwaziyo ngamafomethi amabili avelele angama-xls ne-xlsx, kulungile unefomethi ye-ODS okungukuthi okuzenzakalelayo kwe-Free Office, futhi ngeke uyisebenzise ngaphandle kwalokho. Ngakho-ke lokhu kukuthinta kuphela uma une-Libre Office, uma usebenzisa enye into akudingeki ukhathazeke ngokuthi i-CSV ayisebenzi kangako uma ukhuluma ngamaspredishithi ngokwesabelomali, kodwa ilusizo kakhulu uma Dlulisa idatha eluhlaza iye noma isuke kuzicelo uma unokuxhumana ngokwesibonelo Lolu lwazi luyisibonelo esihle impela, futhi ekugcineni i-PDF ezosiza kakhulu uma ufuna ukushicilela ispredishithi sakho ngohlobo oluthile lombiko. Kulungile, iLibre Office iyesabeka ngoba ungangenisa isazi kuwo wonke la mafomethi ahlukile futhi sizokubona lapha.
Bheka, bekunawo wonke amanye amafomethi lapha futhi kunamadwala engingakaze ngisho ngikhulume ngawo kepha kufanele singakhathazeki kakhulu ngamanye esiwakhathaza nge-ODSxlsx XLS CSV futhi uma uzibuze ukuthi ikuphi i-P i-PDF? leyo nkinobho nje ilungile lapha i-Excel ikuvumela ukuthekelisa kanye nenqwaba yamafomethi ahlukile. Ake sibheke ukuthi yiziphi izinketho esinazo uma kukhulunywa ngokukhipha futhi kusuka ku-Google AmaSpredishithi Kulungile, nasi isibonelo lapho ngakha khona isabelomali sokuqopha esifanayo, into efanayo, kepha ngiyinamathisele kumaSpredishithi ethu e-Google, kulungile nangendlela lapho i chofoza lapha siyabona ukuthi iyafana ncamashi, ukwakheka kungahle kubonakale kuhluke kakhulu kuwe lawa mathebhu wonke noma lezi zinkinobho zihluke kancane kodwa ekugcineni kosuku kuyithebula elifanayo, akulungile, sinezindleko zethu sinezingqikithi zethu nazi izindleko zamayunithi iyunithi ngayinye futhi konke engikwenze lapha bekukhona lapha, uma ngichofoza lapha sizobona ukuthi ifomula ilungile futhi siyakhumbula, noma ngabe sisohlelweni olulodwa ngokuphelele ifomula efanayo, nansi umsebenzi ofanayo wesamba, nangu umsebenzi, kulungile, futhi lapha sisebenzisa ifomula yokususa ukubala inzuzo, bese ngezansi kwendlela yokuhlukanisa ukuthola inzuzo ngelungu ngalinye leqembu ngakho-ke lena yisipredishithi esifanayo ngaphandle kokuthi idalwe ngokungahleliwe kuspredishithi se-google . Ake sithi ngifuna ukonga lokhu Yini engingakhetha kuyo uma ngichofoza Ifayela lapha nginezinketho ezimbalwa zokulanda futhi uyakhumbula ngoba ukuwebhu ngobuchwepheshe zonke izinguquko zigcinwa endizeni, kepha uma wenza empeleni landa leli fayela kwikhompyutha yakho, unezinketho ezimbalwa.
Unenketho yokubasindisa njengefayela le-XLS X elizofaka phakathi i-M yakho i-Microsoft i-excel filewe esikhulume ngayo ngaphambili futhi ngokuthakazelisayo, i-Google empeleni ikunikeza ithuba lokulanda ngqo kufomethi yedokhumenti evulekile okuyifomethi ye-ODS okuyi ifomethi ejwayelekile esetshenziswa yiLibreOffice. Ungakhipha njengombhalo we-PDF, njengakwi-LibreOffice Kulungile, sesivele sikhulume ngamanani ahlukaniswe ngokhefana, amanani ahlukaniswe ngamathebhu afana kakhulu namanani ahlukaniswe ngokhefana, ngaphandle kokuthi idatha ayihlukaniswanga ngamakhoma, konke Ithebhu Ehlukaniswe Ukuthola Ukuthi I-CSV Ithambekele Kokuhlangenwe nakho kwami, amafayela we-CSV athembeke kakhulu kunamafayela ahlukaniswe ithebhu, kepha uyazi ukuthi amamayela akho angahluka.
Akukona ukuphela komhlaba Ungathumela futhi ku-HTML Bheka ukuthi i-xlsx ODS PDF ne-CSV konke kuyatholakala. Nguwe wedwa ongatholakali lapha, kuphela ileveli yakudala ye-XLS, le yinguqulo yakudala ye-Microsoft Excel futhi njengoba ngishilo, ngoba uyazi ukuthi yisoftware endala esiyibona incane manje futhi kungekudala ngeke isaba fanele, kepha okwamanje bengifuna nje ukuqinisekisa ukuthi uyazi ngakho manje ake sishintshele kuhlelo lokusebenza lwewebhu lweMicrosoft ku-SkyDrive bese sibona ukuthi yiziphi izinketho esinazo lapha manje lapho zikhawulelwe khona kancane ngizochofoza kufayela bese sizobona lapha ukuthi empeleni singonga ukuthi singakwenza kanjani bese ngezansi lapha singalanda ikhophi yale ncwadi yokusebenza kwikhompyutha yethu ngakho ngishaya inkinobho yokulanda futhi sibona lapha ukuthi okuwukuphela kwendlela esinayo futhi lokhu kuyi-XLSX nje okuzenzakalelayo kulungile ngakho-ke insiza yewebhu ye-Microsoft Excel ne-SkyDrive zisinikeza ithuba lokulanda i-asxlsx ngakho-ke sizoqhubeka senze lokho futhi ngizoqhubeka ngigcine ifayili bese ngishaya kulungile futhi lisinikeza nje le fomethi eyodwa kepha i-xlsx yifomethi enhle izosebenzisa kakhulu ifomethi ye-ul ngathi a Nginayo njengamanje ilande ikhompyutha yethu Oo kulungile impela ngiyethemba ukuthi lokhu bekungakhathazi kakhulu kepha kubaluleke kakhulu ukwazi wonke la mafomethi wefayela ahlukile ngoba into yokugcina ofuna ukuyenza ukuhlanganisa isikhathi esihle konke lokhu time Spreadsheet bese uyigcina ngefomethi engalungile bese uyiyeka ingakusizi ngalutho, ngakho-ke lawa amafomethi wefayela azokusiza kakhulu ku-screencast elandelayo. Ngizokhuluma nawe ukuthi ungashonaphi ukusuka kuleli phuzu, ungakwenza kanjani lokho? Wandisa ulwazi lwakho lokuthi yiziphi izinyathelo ezinengqondo ezilandelayo endleleni yakho yokufunda uma kukhulunywa ngamaspredishithi futhi ngemuva kwalokho ungawathatha lapho, ngakho-ke sizokubona esihlokweni esilandelayo
Iyiphi i-CSV engcono noma i-XLS?
NgenkathiI-Excel(I-XLSkanye ne-XLSX) amafomethi wefayelakangconoukugcina idatha eyinkimbinkimbi ngokwengeziwe,I-CSVamafayela asekelwa cishe yonkhe inhlanganisela yokulayisha idatha. Uma uhlela ukuhambisa imininingwane yakho phakathi kwamapulatifomu, ukuthekelisa nokukungenisa kusuka kusixhumi esibonakalayo kuya kwesinye, ungahle ubekangconooff ngeI-CSVifomethi yefayela.
Kulungile! Manje siyaqonda ukuthi kungani abantu besebenzisa imininingwane yolwazi, kepha ngicabanga ukuthi abanye benu bangabasebenzisi be-Excel kanti sisacabanga ispredishithi se-Excel lapho sikhuluma ngemininingwane yamathebula, ngicela ningenzi! Amatafula wedatha, yolwazi kanye nama-spreadsheet e-Excel izinto ezihlukile! Kulesi sifundo, sizogxila komehluko ophakathi kwamaspredishithi nezizinda zolwazi. Lo msebenzi awuzukusebenza kuphela kubasebenzisi be-Excel bamanje, izinzuzo nobubi bokusebenzisa imininingwane noma amaspredishithi. Kulungile, ake siqale ngencazelo yokuthi siyini isipredishithi? Ileja ejwayelekile ye-elekthronikhi, inguqulo ye-elektroniki yamaphepha okusebenzela ama-accounting.
Idizayinelwe ukwenza kube lula kubantu okudingeke ukuthi balondoloze imininingwane yabo ye-accounting kwifomu le-tabular ngokwamanani, ngakho-ke kungenzeka ukudala amatafula kuspredishithi. Lesi ngesinye sezizathu esenza abanye abantu bakholelwe ukuthi amaspredishithi nemininingwane iyashintshana kanti empeleni kukhona umehluko phakathi kwalokhu okubili. Zombili zingaqukatha inani elikhulu ledatha le-tabular futhi zingasebenzisa idatha ekhona ukubala.
Okwesithathu, futhi ama-Spreadsheet noma imininingwane evame ukusetshenziswa ngumuntu oyedwa, abasebenzisi abaningi bazosebenza nedatha. Umehluko phakathi kwalezi zinhlobo ezimbili zokugcina idatha usendleleni lezi zinto ezintathu ezisetshenziswa ngayo. Kulungile.
Cabanga itafula. Iseli ngalinye liphathwa njengebhizinisi elihlukile. Ingagcina noma yiluphi uhlobo lolwazi - usuku, inani eliphelele, igama lentambo.
Futhi-ke, hhayi kuphela lapho singaba nezinhlobo ezahlukahlukene zamanani kumaseli ahlukahlukene, kepha singaba nawo lawo maseli futhi sinikeze ifomethi ethile. Lokhu akuyona imvelaphi yolwazi. Ziqukethe kuphela idatha eluhlaza.
Iseli ngalinye liyisitsha esinenani ledatha elilodwa, ucezu lolwazi oluncane kakhulu olukhona. Kufanele usethe kabusha uhlobo lwedatha emkhakheni othile. Lesi sici sivimbela amaphutha ngephutha - ngokwesibonelo, uma umsebenzisi azama ukufaka uchungechunge enkambeni yosuku, isoftware izoshutha uma kwenzeka iphutha futhi inethuba lokuzilungisa.
Lokhu ngeke kwenzeke ku-Excel - uma unamathisela intambo kukholamu yamanani wamadethi, ngeke uthole umlayezo wephutha futhi i-Excel izokonga inani lentambo.Kwispredishithi, idatha ingagcinwa esitokisini, ngenkathi iku-database , idatha ingagcinwa kwirekhodi lethebula okusho ukuthi kufanele ubale amarekhodi etafuleni ukuveza ukuthi itafula ledatha lide kangakanani, hhayi inani lamaseli - awukwazi ukukhetha umbala wefonti noma usayizi. Konke okukhathalelayo ulwazi olugcinwayo; Awunandaba nokufomatha.
Inhloso yethu enkulu ukugcina izinombolo. Omunye umehluko omkhulu ukuthi kuspredishithi, amaseli ahlukile angaqukatha izibalo ezinjengemisebenzi namafomula, futhi umphumela ugcinwa kuseli elihlukile. Ku-database, konke ukubala nokusebenza kususelwa kudatha ekhona futhi kwenziwa ngemuva kokubuyisa.
Kunomsebenzi okhethekile obizwa ngokuthi 'Ukubukwa', ofana namatafula, ongenza isibalo kuwo. Lezi zinto ziqukethe namakholomu angaba amakholomu ajwayelekile njengalawo asematafuleni noma aqukethe uhlobo oluthile lokubala. Ayikho indlela yokudida isethi yedatha ngesibalo.
Izici zemininingwane egciniwe okukhulunywe ngazo kuze kube manje zithuthukisa ubuqotho bedatha - awukwazi ukugcina izinhlobo ezahlukahlukene zedatha emkhakheni ofanayo, futhi akunakwenzeka ukuthi noma ngubani enze iphutha ngenani ledatha ngenxa yesibalo, ikakhulukazi ngamasethi wedatha amakhulu. Ubuqotho bedatha buyinzuzo enkulu lapho usebenza nedatha. Vele, ungacabanga ukuthi ispredishithi singaqukatha amakhasi amaningi okusebenzela, ngakho-ke ungakha amatafula kumashidi wokusebenzela bese usebenzisa amaphepha okusebenzela ukwakha ubudlelwano phakathi kwamatafula.
Kungani uzihlupha ngokusebenzisa imininingwane ehlobene? Yebo, kuspredishithi, ubudlelwano obunjalo bunqunyelwe ngokunengqondo; esikhundleni sokusetha amaspredishithi noma ama-worksheet, ungasetha ubudlelwano phakathi kwamatafula, okuthuthukisa ukusebenza kokusebenza kanye nesivinini ongasebenzisa ngaso isethi yedatha yakho. Yize zinamandla ezimweni eziningi, amaspredishithi anokulinganiselwa kwawo; I-Excel ayikwazi ukuphatha imigqa yedatha engaphezu kwesigidi esingu-1. Lokhu kusishukumisela ngokushesha ukuba sifune isixazululo.
Imvamisa isisombululo ukusebenzisa imininingwane lapho amarekhodi ayizigidi ezi-2, 5 noma eziyi-10 engeyona inkinga ephethwe, amaspredishithi asalela emuva. Ngokuyinhloko, umuntu ngamunye udinga ukubuyekeza ispredishithi sakhe ngemininingwane emisha. Isibonelo, uma kunokuthengwa okusha ukubhalisa noma igama lokugcina elizolungiswa etafuleni le-'Cus 'tomers, umsebenzisi ngamunye kufanele enze lolu shintsho ngesandla.
Ungacabanga ngokufanele ukuthi iGoogle Docs nezinguqulo zakamuva zeHhovisi zixazulula le nkinga, kepha bayenza kancane. Ku-Google Docs, ungaba nenkinga yokuthola ukuthi ngubani owenza ushintsho noma osuse imininingwane ngokungeyikho, okuvame ukuholela esimweni esibucayi lapho abantu bezabalaza ukuhlela imisebenzi yabo. Ngokuphambene nalokho, ubone enkulumweni yedatha yokulawulwa kolwazi ukuthi imininingwane inikezela ngesakhiwo esizinzile nokulawula amalungelo okufinyelela nemikhawulo yomsebenzisi.
Umuntu angenza ushintsho olubonakala ngokushesha kuwo wonke umuntu. Lo msebenzi wandisa ukusebenza kahle nokuvumelana kwedatha lapho usebenzisa imininingwane yolwazi. Ngokubheka ubuqotho bedatha nokuvumelana kwedatha, ukusebenzisa imininingwane kususa imininingwane eyimpinda, engenye indlela yokonga isikhala nokwenza ngcono ukusebenza kahle.
Bheka 'amakhasimende'. Ithebula. Uyazi ukuthi igama nesibongo esinikeziwe lihambisana nekheli elihlukile le-imeyili, ngakho-ke uma wazi ukuthi uJohn McKinley ushintshe i-imeyili yakhe esebenzisa itafula eligcwele idatha, ungathola i-imeyili - Shintsha ikheli kanye bese ngephutha uphuthelwa isibuyekezo sekheli elifanayo ku elinye irekhodi.
Lokhu kungaholela emaphutheni engozi. Zingagwemeka ngokusebenzisa i-database yezobudlelwano - umsebenzisi ovunyelwe udinga ukufinyelela itafula lamakhasimende futhi ashintshe ikheli le-imeyili likaJohn McKinley lapho. Kanye kuphela.
Le nqubo ayigcini nje ngokugcina isikhathi, kepha futhi ivimbela ukungahambelani. Ngakho-ke esikuxoxe ngalesi sifundo kukhombisa ukuthi kungani imininingwane yolwazi iyindawo engcono yokugcina nokulandela idatha lapho usebenza ngobukhulu obuningi nedatha enkulu. Ama-spreadsheet anezinzuzo zawo futhi - ayithuluzi elihle lokwenza ukuhlaziywa okubanzi.
Kepha ukuthola kalula idatha nokuvuselela, ukusebenza kahle, ukungaguquguquki kwedatha, ukuthembeka kwedatha, isivinini, nokuphepha, imininingwane ehlobene nobudlelwano nakanjani iyisakhiwo. Bangakwazi ukugcina idatha eningi eluhlaza futhi balungele ukwahlukanisa idatha. Imininingwane ikhonjiswa njengoba ikhonjiselwa ukuhlaziywa.
Njengoba ubonile, kungaba umqondo omuhle ukuyeka ukuzama ukubona ngeso lengqondo amatafula wedatha ngesimo samaspredishithi. Bahlukile. Hlala ubheke inkulumo elandelayo lapho sizobe sihlinzeka ngamagama amaningi wedatha.
Ingabe i-CSV iyashesha kune-Xlsx?
I-CSVyifomethi yokonga imininingwane yamathebula kufayela lombhalo elihlukanisiwe elinwetshiwe.csvkuyilapho i-Excel ispredishithi esigcina amafayela abe yifomethi yawo ephathelene nama-vls xls nomaumbe. ...I-CSVamafayelaNgokusheshafuthi kudla imemori encane kuyilapho i-Excel isebenzisa inkumbulo engaphezulu ngenkathi ingenisa idatha.Meyi 13, 2021
Ngalesi sifundo, ngidinga ukuvula ibhuku elisha elingenalutho le-Excel 2013. Manje ake sibheke amafomethi wefayela asekelwa yi-Excel. Ngakho-ke ngichofoza inkinobho yefayela ngaphezulu kwesokunxele kwesikrini bese ngichofoza ku-Save As kubha yemenyu yangakwesokunxele.
Ngemuva kwalokho iComputer bese inkinobho ethi Phequlula. Futhi ngichofoza umcibisholo wokudonsela phansi ngakwesokunene semenyu yokudonsela phansi ye-'Save As Type '. Uyabona ukuthi kunezindlela eziningi ezahlukahlukene engingagcina ngazo ibhuku lokusebenza.
Sizoxoxa ngamafomethi wefayela ajwayelekile futhi abaluleke kakhulu. Ngaphezu kwayo yonke ifomethi yebhuku lokusebenzela le-Excel. Lokhu kwaziwa nangokuthi yifomethi ye-Open XML.
Ngaphambi kokukhishwa kweHhovisi 2007, uhlelo ngalunye lwalugcina imininingwane yalo kudiski ngendlela ehlukile. Lezi zakhiwo ezingahambelani zaziwa njengamafomethi kanambambili futhi kwenze kwaba nzima kakhulu ukubhala izinhlelo zokusebenza ezingasetshenziswa ndawonye. Konke lokhu kushintshe ngokwethulwa kwefomethi entsha ye-Open XML.
IMicrosoft ishicilele kahle ukuthi ifomethi isebenza kanjani futhi yayinika umphakathi womakhi womhlaba mahhala. Lokhu kuvumela ezinye izinhlelo ukuthi zisebenze namafayela ebhuku lokusebenza le-Excel ngaphandle kwezinkinga. Isibonelo, i-Apple iPhone isekela okunamathiselwe kwe-imeyili kwe-Office Open XML, ngakho-ke uzofuna ukugcina amafayela akho ngefomethi yebhuku le-Excel isikhathi esiningi.
Qaphela, noma kunjalo, ukuthi kukhona nefomethi yencwadi yokusebenza ye-Excel 97-2003. Le yifomethi yakudala esetshenziswe ngaphambi kokuthi kukhishwe i-Excel 2007. Bambalwa kakhulu abantu emhlabeni manje abasebenzisa i-Excel 2003 nangaphambilini, kepha uma bekufanele wabelane ngefayela nomsebenzisi onjalo, kuzofanela uligcine ngefomethi yakudala ye-Excel 97-2003.
Manje ake sikhulume nge-Excel Macro -Activated Workbook. Ibhuku lokusebenzela elenziwa lisebenze nge-Excel limane liyincwadi yomsebenzi enekhodi yohlelo (ebizwa ngekhodi ye-VBA) efakwe kuyo. AmaMacros angaphezulu kwale nkambo kepha ambozwe izifundo ze-Excel Expert Skills kulolu chungechunge.
Ngenkathi ikhodi ye-macro inamandla amakhulu, futhi ingalimaza ngoba kulula kakhulu ukubhala amagciwane ayingozi kwikhodi enkulu ye-Excel. Izinguqulo ze-Excel ngaphambi kwe-Excel 2007 zingavumela ibhuku lokusebenza ukuthi lithelele ikhompyutha yakho ngegciwane le-macro ngoba wonke amafayela e-Excel angaqukatha ama-macros. Manje njengoba amafomethi esehlukene, sekulula ukugwema ukuvula amafayela angahle atheleleke.
Manje ake sibheke ifomethi ye-Excel Binary Workbook. Kuyinto engavamile kakhulu ukusebenzisa le fomethi, kepha inenzuzo eyodwa kunezinye. Uma usebenza ngebhuku lokusebenza elikhulu kakhulu, kungathatha isikhathi eside ukuvula noma ukugcina.
Incwadi kanambambili ye-Excel ivula futhi isindise ngokushesha okukhulu. Ngakho-ke uma usebenza ngebhuku elikhulu lomsebenzi futhi kuthatha isikhathi eside ukuvula nokugcina, kufanele ubheke ifomethi yebhuku kanambambili ye-Excel. Manje sifika kwifomethi ewusizo kakhulu: ifomethi ye-PDF.
Uma udinga ukuthumela ishidi lokusebenzela kumuntu ongenayo ikhophi ye-Excel, ungaligcina ngefomethi ye-PDF. Imele ifomethi ephathekayo yedokhumenti. Le fomethi yasungulwa yi-Adobe futhi kwesinye isikhathi ibizwa nge-Adobe Acrobat noma i-Acrobat nje.
I-Adobe inikeza uhlelo lwamahhala lokufunda i-PDF, futhi abasebenzisi abaningi sebevele bayifakile kukhompyutha yabo. Uma uthumela i-PDF kumsebenzisi, angafunda futhi aphrinte ishidi lokusebenzela, kepha abakwazi ukulishintsha. Okwamanje, ifomethi yedokhumenti ye-XPS nayo kufanele ikhulunywe ngayo.
Le fomethi ayisetshenziswa kabanzi, kepha iyindlela ehlukile yefomethi ye-Adobe PDF eyenziwe yi-Microsoft. Uyabona ukuthi kukhona nezinye izinhlobo eziningi ezingasetshenziswa kakhulu ezisekelwa yi-Excel 2013, kepha amafomethi esixoxe ngawo yilawo kuphela ozohlangana nawo. Into ebaluleke kakhulu ukuthi kufanele uhlale ugcina izincwadi zomsebenzi ngefomethi ejwayelekile ye-Excel yebhuku lokusebenza ngaphandle uma kunesizathu esizwakalayo sokusebenzisa ifomethi ehlukile.
Manje ngichofoza ku-Cancel ukuvala ibhokisi, inkinobho ye-Back, bese ngivala i-Excel. Futhi usuqede manje Izifundo 1-7 zokuqonda Amafomethi Wefayela Ejwayelekile.
ukufinyelela kwe-bcdedit kunqatshiwe
Ungakwazi ukuguqula i-XLSX ibe yi-CSV?
Ungaguqula kanjaniukuI-XLSXkuya kuI-CSVifayela? Khetha i-I-XLSXfayela lokhowenangifunaguqula. KhethaI-CSVnjengefomethiwenangifunaguqulaeyakhoI-XLSXfayela ku-. Chofoza 'Guqula'ukuzeguqulaeyakhoI-XLSXifayela.
Uyini umehluko phakathi kwama-CSV nama-XL ku-Excel?
I-Excel ispredishithi esigcina amafayela kwifomethi yaso ephathelene nama-vls xls noma ama-xlsx. I-CSV iyifomethi yokonga imininingwane yamathebula kufayela lombhalo elihlukanisiwe elinesandiso .csv. Amafayela alondolozwe ku-excel awakwazi ukuvulwa noma ukuhlelwa ngabahleli bombhalo.
Iyini ifomethi yefayela le-CSV ku-Excel?
I-CSV yifomethi ye-konga imininingwane yamathebula kufayela lombhalo elihlukanisiwengokunwetshwa .csv. Amafayela alondolozwe ku-excel awakwazi ukuvulwa noma ukuhlelwa ngabahleli bombhalo. Amafayela e-CSV angavulwa noma ahlelwe ngabahleli bombhalo njenge-notepad.
Uyini umehluko phakathi kwefayela le-CSV nefayela lombhalo?
I-CSV imele Amanani Ahlukaniswe Ukhefana. Ifayela le-CSV liyifayela nje lombhalo, ligcina idatha kepha aliqukethe ukufometha, amafomula, ama-macros, njll. I-CSV iphephile futhi ingahlukanisa ngokusobala phakathi kwamanani ezinombolo nombhalo. I-CSV ayisebenzisi idatha futhi iyigcina njengoba injalo.
Yikuphi okungcono kunjiniyela, i-Excel noma i-CSV?
I-Excel ivumela ukubuyekezwa kwedatha ngesici esinemininingwane yokulandelela nokubeka amazwana. Njengonjiniyela, kunzima ukuhlela ngokuhlelekile amafayela we-Excel njengoba i-Excel iphathelene. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ezilimini ngaphandle kwe .NET Njengonjiniyela kulula ukusebenzisa i-CSV ngohlelo ngoba, phela, ngamafayela wombhalo alula.